Mhlawumbe, akekho umuntu onjalo empilweni okwakungekho ngisho noyedwa owahlukanisayo, lapho omunye osondelene (osanda kufaka) abantu mayelana nanjengaphandle kwawo, ngokungazelelwe noma ecatshangelwe ngokuphelele, wayeka imihlangano, ukuxhumana, ukuphila okuhlangene. Isimo esivame kakhulu. Ngemuva kwesikhathi esithile sobuhlobo obuhle obuhle, le ndoda iyanyamalala ngokuzumayo - ukugwema imihlangano, ukungazinaki amasms futhi ungaphenduli izingcingo. Kungani amadoda engakwazi ukuhlukanisa? Ingabe kunzima kakhulu ukutshela umuntu iso ukuthi ubuhlobo budlulile? Uma ungahlangani - uzoqonda konke? Empeleni, ekukhunjweni kobuhlobo obuphakathi kwabo (ngisho noma ngabe isonto kuphela), indoda ayikwazi nje ukukusho, ithi, siyaxolisa, kodwa asisondelene? Iningi elikhulu lamadoda kunzima kakhulu ukudweba umugqa ebuhlotsheni ngendlela ephucukile. Kulula ngoba kunzima ukuba baqonde izizathu zesinqumo sabo.
Akunakwenzeka ukuba amadoda ahlukane. Yebo, ovamile (ungasho ukuthi - okuvamile) indoda ayikwazi ukumema intombazane kudlozini lomlingani futhi emva kokudla ngokudumisa ukuthi zonke izinto ziyahamba. Ngakho usebenzisa isamukeli esishaywa - uyama ukukhala. Noma izama ukwakha indawo lapho ubuhlobo ngokwabo buba khona.
Esinye isimo. Intombazane ishiya. Mhlawumbe, ngezinga elilodwa lokudla, nokuzama ukukwenza kube lula, kungenabuhlungu ... Nokho, kukhona iphuzu eliqinile lokubuka ukuthi ukuqeda ubuhlobo kuyilungelo lobulili obuqinile. Kulula ukuqonda konke okubi okuvela enhliziyweni yomuntu ngemuva kokuphula lesi sici. Phela, ukuhlukana kungenakuphikiswa okuhlobene nokuzihluleka komuntu siqu. Lokhu okuhlangenwe nakho kuphulukisa umqondo oqinisekisiwe wenduduzo abantu abafuna ukuyixazulula isimo. Ngifuna ukudiliza, ukuphonsa nokuzonda. Kodwa umbuzo uwukuthi - ngubani? Wena ngokwakho? Ingabe kuwufanele? Kuye ngokwayo sekuvele kubi. Inzondo nokuzihlukumeza kuphela kwandisa isimo. Yena?
I-mishmash ebomvu yothando nothando ingabhubhisa noma yikuphi ukuphela. Umphikisi? Ucabanga ukuthi kufanele kube njalo umphikisi? Lokhu akusona isizathu esivame kakhulu sokuhamba kwabesifazane. Kubonakala sengathi akekho enye indlela ongayithola ngayo indoda. Kungakhathaliseki ukuthi uzidela, noma ubekezela, ungaqalekisa isimo, noma uzonde umphikisi, okuthi, njengoba kuvela, akuhlali njalo. Uma ucabanga ngendlela endala, noma yikuphi isizathu umuntu angase acabange, ekugcineni, uzobeka owesifazane icala ngakho konke. Lokhu kuthululwa kuye ekuphenduleni umonakalo wokungcola, ukuhlambalaza, izinhlamba kanye nezinsongo. Noma okunye okwedlulele - ukugeleza okungapheli kokushaya izingcingo ezifakwe ngokuqinisekiswa kothando, izicelo zokubuyela kanye nesifungo sesithembiso sokuzibeka ngaphansi kwamafasitela. Isimo sengqondo esibi ngowesifazane sinomthelela othile wokwelashwa kumuntu olahliwe.
Uthando, ngenxa yazo zonke izinkinga zakhe, luyaqhubeka kancane kancane. Kodwa ingabe lena indlela engcono kakhulu yokuphuma? Uma owesifazane engumsunguli wokuhlukanisa, kufanele yini ukumcasula? Mhlawumbe wakushiya, ngoba wayengenakho okunye ukukhetha? Kungani amadoda engakwazi ukuhamba kahle, ukuze intombi izisole ngokuhlukana, futhi ayijabuli ngekhefu elifika ngesikhathi? Emqondweni wanamuhla, umbono usungulwe ukuthi indoda yanamuhla kumele ingabi nengozi futhi iqiniseke, futhi zonke izenzo zakhe zigxile ekufinyeleleni umgomo. Kuzwakala sengathi ukuphazamiseka, kodwa abesifazane bakhangwa kakhulu kubantu abakwazi ukuhlukanisa. Okuziphatha njengabantu abadala, abantu abavuthiwe. Ubani abakwazi ukukhuluma ngokukhululekile ngemizwa yabo futhi bamukele izimpikiswano zomphikisi.
Indoda enjalo iningi labesifazane liyabona njengomuntu owaziyo ukuthi ufuna yini nokuthi uyaphi, okungukuthi, njengendoda yangempela. Yiqiniso, kukhona amadoda, kanye nabesifazane, abawazi ukuhlukanisa kahle. Konke kuncike emfundweni, esimweni somuntu, ukuthi imizwa yayinamandla kangakanani. Ungakwazi ukuhlanganyela ngokubonga ngokumane nje ukuthi ubuhlobo nomuntu oyedwa othandekayo bukhona empilweni yakho, ngaphandle kokubona inzondo, intukuthelo, noma intukuthelo ... Ukuhlukanisana nothando. Phela, ukwehlukana kungumphumela othile ebuhlotsheni ababili, kanye nabantu abanothando.
Uyazi ukuthi la madoda angobani nokuthi yini ayidlayo?
Ingabe sidinga izingane kusukela ekubukeni kwamadoda?
Ukwelashwa kokudakwa ngokweqile ngamakhambi abantu
Umyeni wami une fan
Indlela yokuqeda umphikisi?
Ubungani obuphakathi komuntu nowesifazane bubukeka bunjani?
Ungakhetha kanjani isibhedlela sokubeletha esifanele kumama ozayo?
Izinkukhu izitsha ze-multivarkers
Izingozi nokuthembela kwi-intanethi
Izindaba zakamuva ku-Instagram's Instagram Lisa: isithombe sobuhle obubulalayo, isithombe
Zokupheka okumnandi zokudla izitsha
I-smokey ephelele: umthunzi omuhle weholide nosuku zonke
I-Easter curd (kusuka ku-cottage shizi)